नेपालमा सूर्तीजन्य वस्तुको उपभोगबाट २५ हजारको मृत्यु, आजै देखि त्यगौँ पालो तपाईंको पनि आउन सक्छ ! - Jhapa Online
नेपालमा सूर्तीजन्य वस्तुको उपभोगबाट २५ हजारको मृत्यु, आजै देखि त्यगौँ पालो तपाईंको पनि आउन सक्छ !
काठमाडौँ, ९ साउन । नेपालमा प्रत्येक वर्ष सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट करीब २५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।
माछापुच्छ«े बैंक लिमिटेड, सामाजिक सेवा विभाग उपप्रमुख प्रतिमा पाण्डेले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि आफ्नो संस्थाले क्यान्सर काउन्सिलसँग सहकार्य गरी राष्ट्रव्यापी रुपमा अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । शिक्षक गगनसिंह ऐरले सूर्तीजन्य पदार्थ रोकथामका लागि विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई त्यसबाट उत्पन्न हुने विभिन्न रोगबारे जानकारी गराउनुपर्ने आँैल्याउनुभयो ।
असुरक्षित सेक्सले उत्पन्न भएका यी रोगहरु
दुर्गा प्रसाईंलाई कारबाही नभएसम्म कांग्रेसको यस्तो अडान